Shina: Andron’ny fikojakojana tao amin’ny aterineto Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Shina: Andron'ny fikojakojana tao amin'ny aterineto Shinoa
Voadika ny 05 Febroary 2019 8:31 GMT
Tamin'ny 2 jona, tranonkala maromaro ampitan-dranomasina no nobahanana, anisan'izany ny twitter, flickr ary youtube. Androany 3 jiona, tranonkala maro ao an-toerana, toy ny Fanfou (endrika twitter Sinoa) sy VeryCD (tranonkala fizarana loharanom-baovao avy amin'ny mpiserasera) no nametraka fanamarihana fikojakojana milaza fa tsy azo idirana hatramin'ny 6 Jiona ny tranonkala.
Araka ny tatitry ny twitter sasany, dia nanapa-kevitra ireo tranonkala sasany fa haka andro vitsy tsy hiasana noho ny fanerena avy amin'ny departemantan'ny fampielezan-kevitra. Nangatahana ireo mpitantana tranonkala mba hanamafy ny fanivanan-tenan'izy ireo, raha toa ka misy lahatsoratra ahitana ny voambolana toy ny “demokrasia” rahampitso, dia voatery hakatona ny tranonkala. (tao amin'ny williamlong). Nanapa-kevitra hikatona iray andro ireo tranonkala sy bilaogy manokana ho fahatsiarovana ny 4 Jona.
Amin'ireo fepetra rehetra momba ny fanakanana sy fanamboarana rafitra, nibahana ny ampahatelon'ny voambolana nokarohina tao amin'ny google.cn (3 Jiona 10:09 hariva) ny 4 jona, na dia tsy afaka nahazo vaovao betsaka avy amin'ny lisitry ny valim-pikarohana aza ny mpiserasera.
Namorona takelaka ho fanangonam-baovao momba ireo tranonkala voasakana sy tranonkala niato vetivety ireo mpikatroka mpandefa vaovao. Na dia mbola tsy voamarina aza ny vaovao, dia mbola famantarana tsara momba ny fifehezam-baovao nandritra ny fitsingerenan'ny faha-20 taonan'ny 4 Jona izany. Ireto ambany ireto ny fifantenana avy amin'ny lisitry ny takelaka:
Ireo tranonkala nikatona vetivety noho ny fikojakojana:
Ireo tranonkala nampiato ny sasany tamin'ny asany (tahaka ny fanehoan-kevitra, vondrona, fisoratana anarana mpiserasera vaovao, sns..)
xiaonei.com (endrika facebook Shinoa)